नौ नौ महीनामा फेरिने सरकार अब चाँही २ बर्समा मात्र फेरिने रे ?::Pathivara News
ओली सरकारमा एमालेबाट मन्त्री बन्न ठीक्क परेका नेताहरू यी हुन राष्ट्रपतिमा भण्डारी नै दोहोर्‍याउन ओली–प्रचण्डको कसरत ? ‘मेरो दाह्री दुनियाँलाई किन भारी ?’ सफाई अभियानमा लालबाबुसँगै प्रदीप ज्ञवाली र रामकुमारी झाँक्री सुरु भयो एमालेभित्र मारामार !
नौ नौ महीनामा फेरिने सरकार अब चाँही २ बर्समा मात्र फेरिने रे ?
पाँच वर्ष एउटै व्यक्ति प्रधान-मन्त्री होस र स्थिर सरखार बनोस, अनि देशमा सांती र विकास होस भनेर बाम गठबंधनलाई भोट हालियो, जिताईयो l तर अहिले त भाग बंडा र आलोपालो प्रम खाने पो हल्ला छ त ? कुरा के हो ? यो त जनमतको सरासर अपमान हो ! यसले २ ब्यक्ति र २ पार्टीलाई फाइदा भए पनी मूलुकलाइ कुनै फाइदा गर्दैन ।
अहिले बाम गठबन्धनले चुनाव जित्नुको कारण नै ओली प्रतीकों आकर्षण हो । तर अहिले ओलिलाइ घेराबन्दीमा पार्ने काम हुदैछ । यो त जसको बे ऊषैलाई देख्न न दे भने जस्तो भयो । देस र जनता संपन्न बनाऊँन गठबन्धन गरेको की २ पार्टी संपन्न बनाऊन ? एदी प्रचण्डले यस्तो सर्तमा बाम गठ बन्धन गरेका हुन भने यो त सत्तामा जाने र प्रम बन्नका लागी मात्र गरिएको समंझौता रहेछ भन्ने प्रस्ट हुंछ । यसले प्रचण्ड त्यागी होईन सत्ताको लागी जो संग जस्तो संझौता गर्न पछी नपर्ने नेता मात्र हुन भन्ने प्रमाणित गर्छ । यो जनमतको भावना र आसए बिपरीत भयो ।
जो सक्षम छ जसलाइ जनताले प्रम बन भंछ उसैलाइ बनाउनु पर्छ । प्रमको रुपमा प्रचण्ड भारत ज़ादा गरिएका संझौताका प्राय ज़सो सबै बुदाहरू विवादित बनेको थियो, त्यसैले प्रचण्ड प्रधान मन्त्रीका लागी योग्य ब्यक्ति हुदै होईंनन । ५ बर्ष ओलीले नै देश चलाऊन पाऊन ।
मिन बहादुर पण्डित
उनलाइ भाग बंडा गर्न बाध्य नपारियोस । बरू प्रचण्डलाई पार्टी अदक्ष्य वा रास्टपति दीनु, तर प्रधानमंत्री पद भाग बंड़ा गर्न पट्टकै सुहाउदैन । त्यसैले एदी साढे दुई बर्समा आलो पालो गर्ने गरी समझदारी गरिएको भए त्यों गलत भयों । यो कुरा चुनाव अघि जनतालाइ किन भनिएन ?
यो कुरा गोप्य राख्नुको चित्त बुझदो जवाफ जनतालाई दिनै पर्छ । जनताको नज़रमा बाम गठबन्धनको आसय एउटै सरकार ५ वर्ष भन्ने बूझींछ । तर साढ़े २ बर्षको आलो पालो एउटै सरकार ५ बर्ष भन्ने होईन ।
मावोबादी र एमाले पार्टी एकीकरण नै गरे पनी संसारको क़ुन देशमा छ एउटै पार्टीका २ ब्यक्ति आलो पालो गरेर प्रधानमन्त्रि हुने चलन ? यो क़स्तो प्रजातांत्रिक अभ्यास हो ? जनताले बहुमत दिदा पनी स्थिर सरकार चलाऊन नसक्ने वा नचाहने हो भने यो चुनाव पनी सिंडिकेटलाई संस्थागत गर्ने माध्यम मात्र हुनेछ । संसारका क़ुन देसक़ा पार्टीहरूले आफ्नो पार्टीले चुनाव जित्दा प्रधानमन्त्री पद भाग बंडा लगाउछन ? यसको जवाफ दिन सक्ने कोहि छ ?
मङ्लबार, फाल्गुन १, २०७४ मा प्रकाशित
ओली सरकारमा एमालेबाट मन्त्री बन्न ठीक्क परेका नेताहरू यी हुन
काठमाडौँ, १२ फागुन । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली मन्त्रीहरुको सूची बनाउन व्यस्त छन् । एमाले अध्यक्ष ओली निकट स्रोतका अनुसार, ओलीले शनिबार...
राष्ट्रपतिमा भण्डारी नै दोहोर्‍याउन ओली–प्रचण्डको कसरत ?
सफाई अभियानमा लालबाबुसँगै प्रदीप ज्ञवाली र रामकुमारी झाँक्री
सुरु भयो एमालेभित्र मारामार !
ओली सरकार आउने बितिकै चिनले दियो फेरी नेपाललाई अर्को उपहार !